ISS ayaa ku faafaya jeermiska iyo bakteeriyada walwal leh ee cilmiga NASA - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA ISS ayaa ku faafaya jeermiska iyo bakteeriyada NASA
ISS ayaa ku faafaya jeermiska iyo bakteeriyada oo walwal leh cilmiga NASA
NASA ayaa kaliya muujisay daraasad ah in Xarunta Caalamiga Ah ee Caalamiga ah (ISS) ay la socoto bakteeriyada iyo bakteeriyada cudurada. Jermiska ah caan ku ah Dunida mana aha wax la yaab leh in laga helo jawi ba'an sida ISS.
Si kastaba ha ahaatee, su'aasha ku saabsan caafimaadka shaqaalaha ayaa soo baxaya: lixda degan ee hadda degganISS miyay khatar ku jiraan?
Jermiska iyo bakteeriyadu aad u badan?
Daraasad la sameeyay intii lagu jiray bilihii 14, cilmi baarayaasha NASA waxay adeegsadeen farsamooyin dhaqameed dhaqameed dhaqameed, iyo sidoo kale hababka isdaba-gelinta hidda-socodka si loo falanqeeyo shaybaarada laga bilaabo siddeed meelood oo kala duwan oo ku yaalla Stationada Caalamiga ah Meelaha qoob ka-cayaaraha, musqulaha, qolka cuntada, ama xitaa qoob-ka-fiirinta, ayaa sidaas ahaa la kormeero shanlo ganaax ah by koox ka mid ah saynisyahanka. Natiijooyinka daraasaddan ayaa dhawaan la daabacay wargeyska Microbiome waxaana ay ka dhigan tahay taariikhda ugu horeysa ee jimicsiga dhammaystiran ee kaabayaasha.
No yaab leh oo dhab ah, waxaan ka daraasaddan in inta badan microbes in ay baraaraan ee ISS waxaa laga sameeyey by aadanaha, in ay isku xigta ee shaqaalaha iman saarnaa saldhigga sanado bartaan. Cilmi baadhayaashu si aad ah ayay u aqoonsadeen 133 noocyada bakteeriyada iyo sidoo kale boqoshaada 81. iyaga ka mid ah waxaa ka mid ah jirooyinka sida Staphylococcus aureus, guud ahaan la joogo in marinnada our sanka iyo maqaarka, laakiin sidoo kale qoyska Enterobacter Bacillus la helay jirta marinka dheef shiidka.
Iyadoo ISS-da ay hadda ku nool yihiin iyadoo hoos imanaysa khatarta burburka burburka ay ka geysteen howlgalka Shakti, taas oo ka koobnayd burburinta dayax-gacmeedka Hindiya iyada oo adeegsanaysa gantaal, shaqaalaha ISS-da ayaa sidoo kale laga yaabaa si loogu hanjabo by this proliferation jeermiska cudurada.
Khatar dhab ah oo ku xiran moobiilka?
On Earth, waxaanu la kulannaa jeermiskaas dabcan oo dhan maalinta oo dhan. Halkan, waxay mas'uul ka yihiin cudurrada mararka qaarkood noqon kara kuwo halis ah waxaana badanaa laga soo qaadaa cudurka infekshanka nosocomial. Si kastaba ha noqotee, ISS waxa ay caqabad ku tahay labo arrimood oo keeni kara jeermiska xitaa hanjabaad badan in ay noqon karaan Earth. Ugu horreyntii, sida Dr. Kasthuri Venkateswaran, oo ah qoraaga daraasadda cilmi baarista iyo cilmi-baarista JPL NASA (Jet Propulsion Laboratory), wuxuu xusuustaa, nidaamka difaaca ee astronauts waa "si aan caadi ahayn" iyo " ma haystaan ​​helitaanka waxqabadyada caafimaadka ee casriga ah ee laga heli karo Dunida ".
Kadibna, cilmi-baariste JPL wuxuu xusuusinayaa in ISS uu yahay meel si adag loo daboolay, " asal ahaan meesha nooca bakteeriyadu ku dhacdo ". Iyadoo ay ku xiran tahay microgravity, shucaaca, kaarboonka dioxide ka sarreeya iyo wareegga hawada iyadoo loo marayo santuuqyada HEPA, ISS waxaa loo tixgeliyaa "jawi ba'an" halkaas oo bakteeriyadu ay u nugul yihiin.
Marka laga reebo ilaalinta caafimaadka shaqaalaha kala duwan ee ISS, daraasaddan cusubi waxay sidoo kale noqon kartaa mid aad u faa'iido leh oo lagu horumarinayo tallaabooyin cusub oo amniga ah in la geliyo inta lagu jiro socdaalka socdaalka ee mustaqbalka, soo noqoshada astronauts on Moon, ama safar suuragal u ah Mars!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/actualite-853991-iss-fourmille-germes-bacteries-inquietent-scientifiques-nasa.html
Dunida cusub ayaa laga helay nidaamkayaga qorraxda, waxaadna ka caawin kartaa magaca - BGR
SpaceX ayaa si guul leh uga soo kabtay sanka Falcon Heavy ee sanka waxayna ku noqotaa meel bannaan - BGR